Musharax Gaas oo Badhan kula kulmaya qaybaha bulshada iyo odoyaasha gobolka Sanaag (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 11, 2013 5:36 b 0
Badhan, December 11, 2013 – Prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Puntland ayaa maanta booqday degmada Badhan ee gobolka Sanaag, halkaas oo si wayn loogu soo dhoweeyey.
Musharaxa oo u waramay daljir waxaa uu sheegay safarkiisu in uu yahay mid uu ku doonayo in uu ku ogaado baahida shacabka reer Badhan iyo kuwa gobolka Sanaag.
?Dadku si wayn bay noo soo dhoweeyeen, waxaan dareennay in dadku na taageersan yihiin, waxaan kala tashan doonaa baahida jirta si aan u ogaano waxa ay ka rabaan dowladda.? Ayuu yiri Prof. Gaas
Musharax Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xusay in galabta ilaa caawa uu kulamo la qaadan doono qaybaha bulshada ?iyo odoyaasha gobolka Sanaag gaar ahaan kuwa Badhan.
?Dadka Badhan waxay rabaan adeegyo bulsho, waxay rabaan jidad waxay rabaan waxbarasho, waxay u baahan yihiin wax kasta oo deeganada Puntland u baahan yihiin oo adeegyada bulshada ah.? Ayuu yiri Gaas.
Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa la filayaa in uu beri subax ka soo amba-boxo magaalada Badhan isagoo si toos ah u tegaya Garoowe, halkaas oo ay ku balansan yihiin musharixiintu inay kula kulmaan madaxweynaha sabtida toddobaadka dambe.
Dhegeyso: – Faadumo Taxadar oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Prof. Gaas oo badhan jooga
Prof. Jawaari oo ka qayb-galay xuska maalinta xorriyada Kenya oo maanta loo dabaal-degayo